Iziphepho zasehlobo: ziyini, zakhiwa kanjani futhi ziyingozi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela wake waphila ngamandla izivunguvungu zasehlobo. Futhi ngukuthi ngezikhathi ezithile zonyaka, izimo zemvelo zivame kakhulu ukudala iziphepho ezinodlame. Kulokhu, sizokhuluma ngeziphepho zasehlobo nokwakheka kwazo.
Uma ufuna ukwazi ukuthi izivunguvungu zasehlobo zakhiwa kanjani nokuthi ziyini imiphumela yazo, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Iziphepho zasehlobo
2 Zakha kanjani izivunguvungu zasehlobo
3 Wazi kanjani ukuthi isiphepho siseduze
4 Izingozi zesiphepho
Lapho ihlobo seliseduze, amazinga okushisa aqala ukukhuphuka. Ngalokhu, kanjalo nenani lomoya okhuphuka phezulu. Masingakhohlwa ukuthi amandla womkhathi asebenza ngendlela ethile. Umoya oshisayo awuminyene kakhulu, ngakho-ke uvame ukukhuphuka phezulu. Njengoba ufinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu, uhlangabezana nolunye ungqimba lomoya opholile. Uma sibheka isimo esishisayo somoya ophansi siyabona ukuthi izinga lokushisa liyancipha njengoba sikhuphula ukuphakama. Ngakho-ke uma umoya oshisayo uhlangana nomoya opholile lapho ufinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu, uqala ukujiya.
Izinga lokuncipha komoya kuncike ebangeni lokushisa lapho lifinyelela khona ukuphakama okukhonjisiwe kanye nezinga lokushisa elikhona kulolo ungqimba lomoya. Uma izinga lokuncipha emoyeni liqinile futhi nezimo zezemvelo zihlala zizinzile, amafu emvula akha amafu angakha izivunguvungu ezinkulu impela.
Izinsuku zasehlobo zihlala zibalele futhi zishisa. Kodwa-ke, ngezinsuku ezithile, noma ngabe ilanga liqala libalele, isibhakabhaka siqala ukuba mnyama bese siphetha ngesivunguvungu. Yizinga lokushisa eliphakeme elikhiqiza lezi zinhlobo zeziphepho. Ake sibheke ukuthi inqubo ingadala kanjani izivunguvungu zasehlobo.
Zakha kanjani izivunguvungu zasehlobo
Okokuqala kunakho konke ukuhlaziya ukuthi ziyini izimo zokuqala zemvelo. Siqala ngosuku olunamazinga okushisa aphakeme nelanga elifudumeza imvelo. Njengoba imvelo ifudumala, kanjalo nomoya ozungezile. Lapho umoya ushisa futhi izinga lokushisa likhuphuka, ijwayele ukukhuphuka ngoba ilula futhi iyanda ngaphansi kwengcindezi. Le ntuthu eshisayo ekhuphukele ezindaweni eziphakeme ihlangana nomoya obandayo. Lokhu kwehluka kwamazinga okushisa kubangela ukuthi kuthi ukushisa kufinyelele kumaconsi amanzi ngokushesha. Umehluko phakathi kokushisa nokubandayo kubangela ukuthi kuvele ezivunguvungwini lokho imvamisa zihlala cishe ihora.
Inkinga ngalezi zinhlobo zeziphepho ngamandla imvula ewela ngayo. Njengoba inani elikhulu lomhwamuko lwamanzi lijiya futhi libe ngamaconsi akha amafu emvula ngejubane elisheshayo, ancishiswa isenzo samandla adonsela phansi. Masingakukhohlwa lokho for amaconsi amanzi angakha ezindaweni eziphakeme, kudingeka i-hygroscopic condensation nuclei. Lezi zinhlayiya ze-condensation zimane nje ziyizinhlayiya ezisemvelweni ezintantayo futhi ezisebenza njengenhloko yamaconsi amanzi okufanele agcinwe kuzo.
Lapho amaconsi amanzi efinyelela isisindo esivele singamelana nokusebenza kwamandla adonsela phansi, awe ngendlela yemvula. Iziphepho zasehlobo zivame ukuba namandla kakhulu kepha zihlala cishe ihora. Lesi yisikhathi esithatha ukuthi ifu lemvula elenziwe ukuthi linyamalale ngenxa yesenzo salo moya okhuphukayo. Njengoba isivunguvungu senzeka, siyaqhubeka nokubuyiselwa emuva ngumoya omkhulu oshisayo okhuphuka uhlangane neminye imimoya yokushisa okuphansi phezulu.
Wazi kanjani ukuthi isiphepho siseduze
Kujwayelekile kakhulu ukuthi izivunguvungu zasehlobo zimangaze abantu ngoba zenzeka ngokushesha okungalindelekile. Umbani ungasinikeza umkhondo wokuthi ngabe isiphepho siseduze noma cha. Kungasinikeza futhi omunye umkhondo wokuthi noma yini ebisondela kithi iziphepho zasehlobo. Kukhona ifomula elilula elingasisiza sifunde konke ngalesi siphepho.
Le fomula iqukethe ukubheka umbani kanye nokubala ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kuze kuzwakale umhlabathi. Umbani ubonakala ngaso leso sikhathi esakhiqizwa ngaso. Kodwa-ke, ukuduma kuzohamba ngejubane lomsindo. Lesi sivinini singamamitha angama-340 ngomzuzwana. Ngakho-ke, kuya ngebanga lesiphepho eliqhamuka kithi, kuzothatha okuncane noma okuncane ukwenza leyo ndawo ibe yelanga. Ikhilomitha lekhilomitha lihumushela cishe kumasekhondi ama-3. Kuya ngokuthi kuthathe isikhathi esingakanani ukuzwakala, singakwazi ukubikezela ukuthi iziphepho zasehlobo zikuphi.
Uma kudlula cishe imizuzwana emi-3 ukusuka lapho sabona khona umbani kuze kube yilapho kuduma izulu, singazi ukuthi isiphepho siqhele ngekhilomitha. Uma kudlula imizuzwana engu-6, kuzoba amakhilomitha amabili. Nakhu ukuthi, ngokulandelana, singabikezela ukuthi isiphepho sikuphi ngaleso sikhathi. Ngenxa yalolu hlobo lokubala, singabalekela ukubona lesi sivunguvungu singakafiki kithi.
Njengoba sishilo ngaphambili, yize izivunguvungu zasehlobo zivame ukuhlala isikhashana, zivame ukuba yingozi kakhulu. Le ngozi idalwa ukuqina abawela ngakho. Ake sinikeze isibonelo esivame ukwenzeka kaningi ngezinsuku zasehlobo. Siyinto yokuqala ekuseni futhi siphakamisa izimpumputhe sibona ukuthi lilanga elikhanyayo nokushisa okusikhuthaza ukuthi sigeze echibini. Noma kunjalo, Lokhu kushisa okukhulu kungadala isiphepho usuku lonke.
Inkinga ukuthi, ngezikhathi ezithile, kuvame ukuhambisana nesichotho esinzima. Yisichotho esidala umonakalo omkhulu wezinto ezibonakalayo. Ukwakhiwa kwesichotho kubangelwa ukufingqa okwenzeka ngokushesha okukhulu. Lesi sichotho esingadala ukulimala kwempahla nezolimo, ngaphezu kwakho konke.
Iziphepho zasehlobo nazo imvamisa zihambisana nokuduma kwezulu. Yimishudu yombani ekhanyisa njalo isibhakabhaka, ngakho-ke, kunconywa ukuthi ungaphepheli ezihlahleni noma uxhumane nezinto zensimbi. Izinto ezisetshenziswayo kanye nanoma iyiphi into kagesi exhunywe kugesi kufanele ixhunywe ngoba ingalimala yilezi ziphepho.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeziphepho zasehlobo nokuthi zenzeka kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho zasehlobo